यसरी बन्ने रहेछ नेपाली दुनट - भिडियो सहित - ज्ञानविज्ञान
Video स्वास्थ्य/जीवनशैली | July 26, 2017 | mygyanbigyan
बिहानको खाजामा वा दिउँसोको खाजामा तपाई के खान रुचाउँनु हुन्छ ? अथवा के खाने गर्नु भएको छ ? कतै पकाउँन जानिदैन भन्दै सँधै उहि कुराहरु त खानु हुन्न ? वा यसो बाहिर तिर गएर खानाले खाजामा अधिक खर्च त भइरहेको छैन ?
आज हामी तपाईलाई स्वाद फेर्न पनि पाइने र बनाउँन पनि त्यति खर्च नहुने खाजाको परिकारका बारेमा जानकारी लिएर आएका छौँ । सबै भन्दा रमाइलो कुरा के छ भने यो परिकारलाई तपाईले बिसाइ बिसाइ उपयुक्त समय हेरेर खण्ड खण्डमा तयार पार्न सक्नु हुन्छ । लगातार भान्सामा बसिरहनु पनि पर्दैन । त्यस्तै लगातार यहि परिकारलाई समय दिइरहनु पनि पर्दैन । केहि बेर परिकारलाई समय दिएर अन्य काम पनि सँगसँगै गर्न सकिन्छ ।
शिर्षक हेरेर थाहा पाइसक्नु भयो, यस्तो परिकार हो नेपाली दुनट ।
अहिले काठमाण्डौका गल्लि गल्लिमा पनि यस्ता दुनट पसलहरु पाइन थालेका छन् । बाहिर पकाएको मन नपर्नेलाई त्यहि स्वादका दुनट घरैमा तयार गर्न मन भए यो भिडियो हेर्नुहोला ।
यो भिडियोमा हामीले नेपाली दुनट कसरी बनाउँने भन्ने सबै भन्दा सजिलो तरिका समेटेका छौँ ।
यो लेखमा प्रयोग गरिएको भिडियो युट्यब च्यानल जुनालीज् कुक बुक (COOKBOOK) बाट साभार गरिएको हो । कुक बुक युट्युब च्यानलमा यो सँगै अन्य मिठा मिठा परिकारहरु कसरी बनाउँने भन्ने सजिलो बिधि सिकाइएको छ ।
भिडियो हेर्नुहोस् र घरैमा स्वादिस्ट परिकारको मज्जा लिनुहोस् । युट्युबबाट थप जानकारी लिनका लागि कृपया युट्यब च्यानल जुनालीज् कुक बुक (COOKBOOK) लाई सब्सक्राइब गर्नुहोला ।
जुनालीज् कुक बुकनेपाली परिकार
Previous Postसामान्य ब्रेडबाट यसरी बन्छ ग्रिल्ड चिज स्याण्डविच – भिडियो सहितNext Postयसरी बनाउनुस् स्वादिष्ट आलु र भेडेखुर्सानीको परिकार